कसरी घरेलू आईपल कपाल हटाउने को उपयोग गर्ने? तपाईंले कुन कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ? तपाईले उत्तर - टेक्निकल जानकारी जान्न चाहानुहुन्छ - शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण कम्पनी सीमित
कसरी घरेलू आईपल कपाल हटाउने को उपयोग गर्ने? तपाईंले कुन कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ? तपाईंले उत्तर जान्न आवश्यक छ
समय: 2020-06-04 हिट्स: 6
आईपीएल घरेलु कपाल हटाउने सूचना
अन्तिम लेख पढेपछि, केटीहरूले आइपीएल कपाल हटाउने उपकरण कसरी ues गर्ने भनेर थाहा पाउनुपर्दछ। त्यसैले यो लेख हामीले मुख्य रूपमा परिचय गर्छौं, अपरेसन अगाडि र पछाडि हामीले के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ? म तपाईंलाई एक एक गरेर देखाउन चाहन्छु।
१ 、 रासायनिक शिलाभरण विधिहरू जस्तै डिपिलेशन क्रीम डिप्रेलेसन अघि प्रयोग गर्न सकिदैन। किनभने आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणको सिद्धान्त कपालको फोलिकल नष्ट गर्नु हो, डिपिलेशन इन्स्ट्रुमेन्टको प्रभाव डिपेलेसन क्रीमको प्रयोगले असर गर्ने छ, त्यसैले डिपिलेसन क्रीम डिपाइलेसन अघि प्रयोग गर्न सकिदैन।
२ dep बिरामी पर्नु अघि तपाईले छालाको कपाल दाढी गर्न रेजर, पिलर र मोम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने डिपाइलेटरमा मेलानिन नष्ट गर्न ठूलो उर्जा छ, छालाको कपालले उच्च तापक्रम लिन सक्छ र छाला जलेको हुन सक्छ, त्यसैले यो डिपिलेसन हुनु अघि दाढी गर्नु आवश्यक छ।
、 Use प्रयोगको अवधि पछि, छालाको रंग सेतो देखि कालो, सेतो देखि बैजनीमा परिवर्तन भयो भने, कृपया ध्यान दिनुहोस्। किनभने फोटोनहरू मूल रूपमा चिकित्सा उद्योगमा प्रयोग गरिएको थियो, यदि माथि उल्लेख गरिए अनुसार छालाको र changes परिवर्तन भएमा फेला पर्‍यो भने, यसले तपाईंको छालाको अन्तर्निहित तहमा घावहरूको उपस्थितिलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ।
、 、 प्रयोग पछि, छाला अलि रातो हुन्छ, र रातो रातो र सूजन सबै सामान्य हुन्छन्। यो एक घण्टा सम्म कम हुन्छ।
、 The यदि छालामा आफैंमा ज्वलन्त रोग र अन्य सर्तहरू छन् भने, यस समयमा यसलाई फोटोन कपाल हटाउने प्रयोगको लागि अनुमति छैन। छालाको अवस्था सुधार भएपछि यसलाई प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ।
、 After प्रयोग पछि सूर्य संरक्षणमा ध्यान दिनुहोस्। कुनै अधिक सूर्य जोखिम छैन। यदि यसलाई बेवास्ता गर्न कुनै तरिका छैन भने, तपाईं शारीरिक आश्रय, सनशेड, सनस्क्रीन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र सुरक्षाको लागि सनस्क्रीन राख्नुहोस्।
、 Phot यो सम्भव छ कि फोटोन थेरापी पछि छाला राम्रो हुन्छ, किनकि फोटोनले छालालाई सुशोभित गर्ने प्रभाव पार्दछ। Depilator प्रयोग पछि, यो छाला सौन्दर्य उत्पादनहरु संग राम्रो संग पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यी केहि बुँदाहरू हुन् जुन मैले सारांशमा प्रस्तुत गरेको छु। म तपाईंसँग उनीहरूसँग बाड्न पाउँदा खुशी छु। हाम्रो कम्पनी आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणमा विशिष्ट छ। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्नुहोस्।
अघिल्लो: आईपीएल कपाल हटाउने घर प्रयोग को रहस्य
अर्को: सौन्दर्य सैलुनमा कपाल हटाउने उपकरणहरू के के हुन्?